Wiilka Soomaaliya umetalaya Olambikada oo Dal kale sheegtay inuu udhashay ShareWargeyska Tuko, ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa daabacay in Oordyahanka Soomaaliyeed ee Max’ed Da’uud Max’ed oo Soomaaliya ” | Saxil News Network
Wiilka Soomaaliya umetalaya Olambikada oo Dal kale sheegtay inuu udhashay ShareWargeyska Tuko, ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa daabacay in Oordyahanka Soomaaliyeed ee Max’ed Da’uud Max’ed oo Soomaaliya ”
August 10, 2016 - Written by admin
Nairobi (Saxilnews.com)-Wargeyska Tuko, ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa daabacay in Oordyahanka Soomaaliyeed ee Maxamed Da’uud Maxamed oo Soomaaliya ku matalaya Ciyaaraha Fudud ee ka socda Brazil uu u dhashay Kenya Soomaaliyana uu ku matalayo Brazil.
RIIX HALKAN: DHAGEYSO WARBIXINTA
Wargeyska ayaa ku dooday in Maxamed Da’uud oo ku dhashay Wajeer uu dhowr jeer ka qeyb galay tartamo gudaha Kenya ka dhacayay sida Mombasa, Eldoret iyo meelo kale inkasta oo uusan ku guuleysan in la qaato sida ay sheegeen.
Maxamed waxaa uu ka qeyb galayaa Tartanka Orodka 5,000M,waxaana uu la tartamayaa Dad ay ka mid yihiin Labo tartame oo u dhashay Kenya, halkaas oo ay taal Billad Dahab ah, mid Maar ah iyo mid Qalin ah.
Maxamed ayuu Wargeyska ku sheegay in uu ka niyad jabay in ay qaadan waayeen Xiriirka Ciyaaraha fudud ee Kenya, waxaana uu ugu dambeyntii aaday bey yiraahdeen Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, halkaas oo uu tartamo Oroddo ah oo uu ka qeyb galy 5 jeer ku guuleystay una sahashay in uu hadda Soomaaliya ku matalo Tartanka Ciyaaraha fudud ee Orodka oo kamid ah Tartamada ka socda Brazil.
Maxamed ayuu wargeysku ku sheegay in uu ku guul darreystay in uu Qarankiisa Kenya ku matalo Ciyaaraha fudud,waa sida uu u qoraye, waxaase u wareegay dal kale oo ay dhaqan, Luuqad iyo Isir wadaag yihiin, halkaas oo uu ka xaqiijiyay rayadiisa ahayd in uu ka qeyb galo ciyaaraha Caalamiga ah.
Maxamed Da’uud iyo Maryan Nuux Muuse ayaa Soomaaliya ku matalay Ciyaaraha ka socda Brazile,waxaana ay ka mid yihiin kumanaanka Ciyaartooy ee Brazil u jooga in ay ka qeyb galaan tartamada kala duwan ee ka soconaya Magaalada Rio de Janeiro.
Maxamed Dad’uud Maxamed waa Muwaaddin Soomaaliyeed kuna dhashay magaalad Wajeer ee Gobolka Soomaalida Dalka Kenya, waxaana uu eex iyo faquuq kala kulmay Xiriirka Ciyaaraha fudud ee Kenya oo ka hor istaagay dhamaan isku dayadii uu ka sameeyay tartamada gudaha Kenya.
Waxaana ay hadda muujinayaan Warbaahinta Kenya in ay ka xun yihiin in Maxamed Da’uud Maxamed in uu dalkiisa Soomaaliya ku matalo Caalamka.
Haddii ay sidan uga xunyihiin, maxaanay u heysan markii uu Mombasa iyo Eldoret u tagayay tababaradda iyo horumarinta riyadiisa?
Waa maxay sababta ay niyadda uga jibiyeen isaga oo matali kara iyaga ,haddii uu go’aan qaatayse uga daba dhegganyihiin?